Inzuzo - lokhu ingenye izinkomba main futhi ebaluleke kakhulu yezohwebo kwezomnotho. kanjani lo mqondo iphathwa? Kukholakala ukuthi ukuhweba - isenzo ogxile exchange of umkhiqizo othize ku lwemali. Ngakho, lapho kuyinchubo lechubekako ukunyakazisa izimpahla namasevisi eyenziwa esebenzisa ezilandelwayo izivumelwano, noma ukuthengwa nokudayiswa ukuthengiselana.
Lo mqondo ingabonwa ngezindlela ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, i-inzuzo - ukunyakaza lapho Igxila umkhiqizo njengoba into ngokushesha yohwebo. Futhi ngakolunye - konke ukunakwa igxile ukuthengwa nokudayiswa kuthengiselana, njengoba yithuluzi ukukhuthazwa izimpahla emakethe kuqala, bese ngqo umthengi.
Okwamanje, kukhona ezinye izinhlangano ukuthi ngokukhethekile ekuqhubeni imisebenzi yokuhweba. Bayaqaphela abakhiqizi kwezimpahla bese uthola iphesenti kuthengiselana. Ukukhiqizwa livela nomkhiqizi kwi maphilisi isisekelo. Ngakho, inkampani has a ukuthi adayise umkhiqizo othize. Ngokuba iningi ibhizinisi inzuzo - kuyindlela ukufeza izinzuzo zomnotho, okungukuthi, ukuba yenze inzuzo eningi. Futhi ngaleli zinga ezingeni emakethe ibonisa degree of kuhlomisa sabantu nezimpahla ezidingekayo, futhi kungakho ngandlela-thile ephawula lokube nawo ezingeni lekuphila yezakhamuzi.
Inzuzo zingahlukaniswa ngamaqembu amabili main: i lwezeMpilo Usizo. Esokuqala sembula inqubo kwempahla endaweni lapho kukhona yokudlulisela oqondile. Singasho ukuthi inzuzo okudayisa - kuba esigabeni sokugcina umkhiqizo ukunyakaza. Uma sicabangela lokhu umqondo njengoba inkomba kwezomnotho, kungenzeka ukwethula ke ngesimo zibiza malini ivolumu kwezimpahla ezikhishwe emakethe. Ngakolunye uhlangothi, i-inzuzo ukuhweba iimfesi kubonakala inani imali etholakale ngokudayiswa, futhi, ngakolunye uhlangothi - ke ephawula ezingeni izindleko zomphakathi ukuthenga imikhiqizo.
Ngaphansi komthetho wamanje, lesi sibalo sihlanganisa hhayi kuphela ngevolumu engenayo evela yokuthengisa okunezinhlobonhlobo sabantu, kodwa futhi yokuthengisa kwamanye counterparties ukuthi bathenge izimpahla ngenhloso isevisi izakhamuzi. Inkomba inzuzo okudayisa uyakwazi kubonise ngokugcwele degree of ekukhuleni wenkampani, inhlalakahle izethameli eziqondiwe, ngisho isimo jikelele emnothweni kazwelonke.
uhwebo lwezitolo kuyinto ukuhamba kwezimpahla kwezinye izinhlangano ukuhweba ngenjongo kabusha noma kwezinye izinkampani ukusetshenziswa emisebenzini yabo ekukhiqizeni njengoba izinto zokusetshenziswa ukuba. Ngokungafani okudayisa, at imikhiqizo wholesale ahlale ezingeni kwegazi.
Kungenziwa labizwa ngokuthi inzuzo wholesale nge uya khona: uhlelo yangaphakathi lezo zinhlelo. Isigaba sokuqala libhekene ezinkulu izinkampani commercial, njengoba kubonisa ukuhamba kwezimpahla kusukela ibhizinisi commercial kwenye elithengisa. Futhi ngokuhambisana nendlela ukuqaliswa izimpahla inkampani eseqedile imikhiqizo nezinkampani wahlanganyela ukuhweba ukudayisa, ukwenzelela ukudla, ngenhloso ukusula exchange, kanye ukuthekelisa emazweni angaphandle. Esikhathini summation imiphumela salezi zigaba ezimbili izinkomba etholakalayo kusukela okwedlulele noma Imininingwane inzuzo wholesale.
It lenza kube nomehluko ocacile phakathi imiqondo "isakhiwo" kanye "value" inzuzo. Ngisho ngaphansi kwaziphi izimo akunakwenzeka ukuba sizithole. Ukwakheka Inkomba wembula ezihlukahlukene implementations nokubaluleka kwalo inani yokuthengisa izimali, imali esesandleni kanye izimali ebhange. Lokhu ngokwahlukana kungenxa yokuthi omsebenzi bangaphila kubhekwe njengento kokubili isilinganiso qualitative ambalwa.
Izimali zamanje ze-akhawunti ukuthengiselana
Ludmila Pakhomov: Biography, izithombe, imbangela yokufa
5 izinto ungakwazi ukutshela mayelana obuphelele umuntu iminwe yakhe